बौद्धिक नेता पशुपति दयाल किन नेपालगञ्जको मेयर बन्न सक्दैनन् ? – Sadarline
शिक्षासंग सरोकारवालाहरुको संयुक्त अनुगमन
इजाजत प्राप्त हतियार प्रहरीलाई बुझाउन सुर्खेत प्रशासनको अनुरोध
बाँके प्रहरीले फेला पारेको गरगहनासहितको झोला धनिलाई बुझायो
बौद्धिक नेता पशुपति दयाल किन नेपालगञ्जको मेयर बन्न सक्दैनन् ?
मीना सुवेदी ढकाल २७ बैशाख २०७९, मंगलवार २१:२०
“सपना देख्नुपर्छ राम्रो सहर बन्नलाई पनि
धातु गल्नुपर्छ, आकारमा ढल्नलाई पनि
भावी सन्ततीको अभिभावक हौ हामी सबै
किन धर्मर गर्छौ राम्रो नगर प्रमुख छान्नलाई पनि”
नेपालगञ्जको भावी मेयर को बन्दैछ भन्नेमा विभिन्न कोणबाट अड्कलबाजी भइरहेका छन् । नेपालकै पूरानो सहरमध्येको एक नेपालगञ्जको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिले पश्चिम नेपालकै नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि भावी मेयरबारे यति धेरै चर्चा हुनु पनि स्वभाविकै हो । कुन दलबाट मेयर बन्छ भन्ने भन्दा पनि ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेको सद्भावको सहर भनेर चिनिने नेपालगञ्जको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, दक्षता र दूरदर्शिताको पनि लोखाजोखा यही निर्वाचनकै बेला हुन जरुरी छ । राम्रो नेतालाई चुनेर पठाएनौ भने आगामी ५ वर्ष हामी पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन ।
नेकपा एमालेले नगरबाट सर्वसम्मत् रुपमा पशुपति दयाल मिश्रलाई नगर प्रमुखको उम्मेदवार चयन गरेपछि उनीविरुद्ध तत्कालिन मधेस आन्दोलनलाई प्रोपोगण्डाको रुपमा उछालेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हुँदैछ । समग्र उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा अब्बल मिश्र नै छन् । उनीमाथि त्यसैले चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । सर्वसाधारणलाई मिश्रका योग्यता, क्षमता र दक्षता गुमराहमा राख्दै प्रचार प्रसार भइरहेको छ । त्यसैले मिश्र को हुन् र उनको नेतृत्वमा नेपालगन्जको विकास कसरी हुनसक्छ भन्ने जानकारी दिन पनि एक मतदाताको हैसियतमा मलाई केही कुरा लेख्न बाध्य बनाएको हो ।
पशुपति दयाल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर मन्त्री बन्ने हैैसियत राख्छन् । नेपालगञ्जको मेयर बन्नमा कुनै योग्यताको कमि छैन । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका मिश्र २०५४ सालमा तत्कालीन हिरमिनिया गाविस अध्यक्ष भएका थिए । उनमा रहेको नेतृत्व क्षमताकै कारण २०५४ सालमा नै गाविस महासंघको अध्यक्ष भएका थिए । २०६३ सालमा उनी जिविस सभापति भए । २०६६ सालमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य पनि बने । टिकटकै लागि रातारात पार्टी प्रवेश गरेका व्यक्ति पनि होइनन् । उनीसँग राजनीतिको लामो अनुभव छ । तमलोपाको केन्द्रिय सदस्यदेखि केन्द्रीय सह–महामन्त्री भइसकेका छन् । उनी अहिले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य र बाँकेका सह इन्चार्ज हुन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मिश्रले सू्र्य चुनाव लिएर बाँके क्षेत्र नं २ मा चुनाव लडेका थिए । मिश्रले १६ हजार मत ल्याएर दोस्रो भएका थिए । जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेर मिश्र एमाले बनाउने अभियानमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा चार हजार मान्छे एमाले प्रवेश गराएर मधेसमा वाहीवाही कमाएका छन् ।
उनको परिचय यतिमै सकिँदैन । कर्णाली डेभलप्मेन्ट बैंकको संस्थापक सञ्चालक एवं अध्यक्ष हुन् । रेडियो बागेश्वरी एफएमको संस्थापक सञ्चालकदेखि हालसम्म आबद्ध छन् । उनको ओम प्लाइ एन्ड फर्निचर प्लाइवुड फैक्ट्री पनि छ । उनी त्यसको महाप्रबन्धक हुन् । बाँकेको सबैभन्दा ठूलो फनपार्क मेरो प्लानेटको संरक्षक हुन् । यो बाहेक विभिन्न व्यापारिक संस्थाको अनुभव पनि छ । नेपालगञ्जको विकासका लागि उनको योगदान पनि छ । विगतमा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय संघर्ष समितिको सह–संयोजक र संयोजक थिए । नेपालगञ्जवासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्यको हब तथा ग्रीन सिटी र स्मार्ट सिटीको आधार निर्माण गरेर सपना साकार गर्ने उनको घोषणा पत्र छ । नेपालगञ्जको विकास र समृद्धिको सपना देख्ने मिश्रलाई तत्कालिन मधेस आन्दोलनसँग जोडेर उनको मान मर्दन गर्न मात्र खोजिएको छैन कि नेपालगञ्जका लागि योग्य उम्मेदवारलाई मतदातामा भ्रम सिर्जना गरिएको छ । मान्छेको विगत नै सबैथोक होइन । वर्तमानमा उसले गरिरहेको कर्मले भविष्यलाई डोर्याउँछ । यही कुरा बुझाउन मलाई बाल्मिकीको सानो किस्सा जोड्न मन लाग्यो ।
को हुन् वाल्मिकी अर्थात रत्नाकर
हामीले रामायण पढेका छौं । सुनेका छौं । जब जब सत्ता र शक्ति उन्माद, विवाद र विखण्डनको विषय आउँछ, तब रामराज्यको चर्चा हुुन्छ । पौराणिक कथा रामायणको रचयिता बाल्मिकी हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा होला । तिनै वाल्मिकीको पृष्ठभूमिबारे हामी अझ अनभिज्ञ हुनसक्छौं ।
यो धेरै पूरानो पौराणिक कथा हो । रत्नाकर नामक एक जना कुख्यात डाँकुका सरदार थिए । उनी परिवारको भरणपोषणका लागि चोरी, लुटपाट र निर्मम हत्यामा संलग्न हुन्थे । एक दिन एक जना ब्यक्ति पाल्कीमा बनेर जंगलको बाटो गइरहेका थिए । घना जंगलमा लुकेर बसेका रत्नाकर र उनका साथीलेसबै धन लुटेर हत्या गरिदिए । त्यसपछि राजाले नगरमा घोषणा गरिदिए की कोही पनि ब्यक्ति एक्लै जंगलको बाटो जाने छैन । यसले सबैतिर भय त्रासको वातावरण सिर्जना भयो । कोही जंगलको बाटो एक्लै जान डराउँथे । संयोगले एक दिन देवर्षी नारद त्यही बाटो भएर जाँदैथिए । रत्नाकरले नारदलाई पनि रोके । उनले के तिमीलाई मेरो डर लाग्दैन । मर्नदेखि डराउँदैनौं भनेर सोधे । नारदले आफूलाई निर्भय भएको र कसैको डर नभएको बताए । उनले रत्नाकरलाई पनि सोधे, के तिमीलाई डर लाग्दैन ? रत्नाकरले पनि आफू निर्भय भएको र कसैको डर नभएको जवाफ फर्कायो । नारदले फेरि सोधे, त्यसो हो भने तिमी किन जंगलमा लुकेर बसेका छौं ? पापदेखि डराउँछौ ? कि राजासँग डराउँछौं ? कि प्रजासँग डराउँछौं ?
रत्नाकर आर्कोशमा आएर भन्छ, म पापी होइन । न राजासँग डराउँछु, न प्र्रजासँग नैै । नारदले प्रतिप्रश्न गरे, त्यसो हो भने जंगलमा किन बस्छौं ? रत्नाकरले यर्थाथता बतायो, म सैनिक थिए । ममाथि झुठो आरोप लगाएर राजद्रोहमा निकाला भयो । मेरो दोष थियो, मैले गलत मान्छको साथ दिएन । यो समाजले अपराधलाई भुल्छ । अपराधीलाई कहिल्यै क्षमा गर्दैन । त्यसैले म यो समाजसँग आफ्नो प्रतिशोध लिइरहेको छु ।
नारदले भने, निसन्देह तिमीमाथि गलत भएको छ । तिमी गलत गरिरहेका छौ । के त्यो सही हो ? यो पापमा तिम्रो परिवार भागिदार होला त ? रत्नाकरले जवाफ फर्र्कायो, यदि मैले पाप नै गर्छु भने पनि मेरो परिवारले पापको कमाइ खान्छ । त्यसैले उनीहरु पनि मेरो पापको भागिदार अवश्य हुनेछन् ।
रत्नाकरले नारदलाई तिमी उपदेश नदेउ, अब मर्न तयार होउ भन्छ । नारद आफू मर्न तयार भएको बताउँदै अर्को प्रश्न सोध्छन्, के तिमीले परिवारको सदस्यसँग कहिल्यै सोधेका छौं । उनीहरु तिम्रो पापमा भागिदार हुन्छन् त ? यदि सोेधेका छैैनौ भने तिमी व्यर्थै उनीहरुको लागि एक्लै यो जंगलमा मानिसको हत्या गरिरहेका छौं । जघन्य अपराधको भागिदार बनिरहेका छौं । नारदको प्रश्नले रत्नाकर विचलित भयो । नारदलाई रुखमा बाँध्न आदेश दियो । र भन्यो, म अहिले घरमा सोधेर आउँछु । ताकी म ब्राह्मणलाई आरामले मार्न सकँु । रत्नाकरले घर पुगेर बुबा र पत्नीलाई सोध्यो, मैले जुन काम गरिरहेको छु । के यो पाप हो ?
पत्नीले भनिन्, चोरी, लुटपाट र हत्या गर्नु त सधैं नै पाप हुन्छ स्वामी । पत्नीको यो भनाइ सुनेर डाँकु रत्नाकर फेरि विचलित भयो र फेरि सोध्यो, यदि यो पाप हो भने तिमी मेरो पापमा भागिदार छौ त ? पत्नीले विनम्र भएर बोलिन्, तपाई मेरो पति हो । तपाईको सुख दुःखमा साथ दिने कसम खाएकी छु । तपाई पापको भागिदार हुनका लागि होइन ।
रत्नाकरले यही प्रश्न बुबासँग सोध्छ । बुबा जवाफ दिन्छन्, छोरा यो त तेरो कमाइ हो । यसलाई म कसरी बाँड्न सक्छु ? यो सुनेपछि रत्नाकर छाँगादेखि खसे जस्तो भयो । ऊ घरबाट निस्क्यो र जंगलमा नारद भएको ठाउँमा पुग्छ । नारदको पाउ समातेर क्षमा माग्छ । नारदले उसलाई पुरुषार्थले भविष्य निर्धारण गर्ने आशिष दिन्छन् । रत्नाकर आफू रुपान्तरण हुने संकल्प गर्छ । कडा तपस्या गर्छ । हरेकका मनमनमा बस्न सफल पौराणिक कथा रामायणको रचना गर्छ र महर्षि वाल्मिकी बन्छ । जब रत्नाकर जस्तो कुख्यात डाँकुको हृदय परिवर्तन हुनसक्छ । एउटा डाँकु महान कवि वाल्मिकी बन्न सक्छन् । भने तपाई अनि हामी किन परिवर्तन हुन सक्दैनौं ?
पशुपति दयालले एउटा कालखण्डमा, एउटा परिस्थितिमा गरेको कर्मको हरेक निर्वाचनमा बदला भाव किन राख्छौं । पशुपतिदयालले गल्तीको दर्जनौं पटक क्षमायाचना गरिसके । आफूलाई सच्चाइ सके । उनी रुपान्तरण भइसके । एमाले पशुपति दयाललाई स्वीकारेर घर भित्र्याइसकेको छ । उनले समृद्ध नेपालगन्ज बनाउने सपना देखिसकेका छन् । उनीसँग योजना छ । विकासको खाका पनि छ । समृद्धिको सपना देख्ने दल एमाले पनि छ । जनताको भावको भाव बुझ्ने जनप्रतिनिधिको स्वभाव पनि छ । नेतृत्वमा हुने सबै गुण भएको व्यक्तिलाई हामी आफू रुपान्तरण हुन नसकेर किन त्यही खाटामा बसेको घाउ कोट्याइ रहेका छौं ? नेपालगन्जका लागि पशुपति दयाल योग्य व्यक्ति हो । अब नेपालगन्ज नगरबासी रुपान्तरण हुन बाँकी छ । पशुपति दयाल जस्तो बौद्धिक, विकासको सपना देख्ने, भिजन भएको, एक सबल नेतृत्वलाई साथ दिऔं । नयाँ संकल्पबाट भविष्य निर्धारण गर्न ढिलो नगरौं । हामी सच्चिने भनेकैै पशुपति दयाल जस्तो दूरदर्शी नेतालाई नेपालगन्जको मेयरमा जिताउन हो ।
उनी शालिन पनि छन् । ‘नेपालगञ्जको विकासको लागि मसँग दृष्टिकोण छ । कार्यान्वयन गराउन सक्ने क्षमता छ’, मतदातासँग भोट माग्दै भनिरहेका छन्, ‘मलाई आफ्नो खुबी, भिजन, कार्यशैली र दूरदर्शिताले जनताको मनमा राज गरी चुनाव जित्नु छ । न की अरू प्रत्यासी उम्मेदवारहरुको कुरा काटेर, अरुलाई होच्याएर, गिराएर, खसाएर अनि भोटको राजनीति गरेर । तपाईंको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ । म निर्वाचन जित्छु । नेपालगन्जले पनि जित्छ ।’
२७ बैशाख २०७९, मंगलवार २१:२०
नेपालगञ्ज : बाँकेमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी करिव ६ हजार २ सय परिचालन भएका छन । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले दिएको जानकारी अनुसार स्थनीय निर्वाचनका लागि जिल्लाका ८ वटै पालिकामा निजामती र संस्थानका कर्मचारी गरी २ हजार २ सय जना परिचालन […]
१४ आश्विन २०७५, आईतवार १५:००
१२ बैशाख २०७९, सोमबार १७:४४
एमालेबाट नगरप्रमुखमा मिश्रको उम्मेद्वारी
१२ आश्विन २०७६, आईतवार १५:५७